वडा कार्यालयमै अर्काकी श्रीमतिसँग मध्यरातमा वडाध्यक्ष शर्माको यस्तो मस्ती
सल्यान । जनप्रतिनिधि नै मध्यराती वडा कार्यालयमै यौन लिलामा व्यस्त रहन्छन् भन्ने सुन्दा सर्वसाधारणले के सोच्लान् ? अवस्य पनि राम्रो सोच्दैनन् ।
त्यसमा पनि वडाध्यक्ष अर्काकी श्रीमतिसँग वडाध्यक्ष मध्यरात वडा कार्यालयमै अनैतिक कार्य गरेको अबस्थामा स्थानीयहरुले फेला पारे झन के होला ? तर यहाँ यस्तै भएको छ ।
सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका ४ का वडाध्यक्ष छविलाल शर्मा बुधबार राती स्थानीय एक महिलासँग वडा कार्यालयमै अनैतिक कार्य गरिरहेै अवस्थामा स्थानीयले फेला पारेका छन् । मध्यराती अर्काकी श्रीमतिसँग कार्यालयमै अनैतिक कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा स्थानीयहरुले फेला पारेपछि प्रहरीको जिम्मा लगाइदिएका छन् ।
वडाध्यक्ष गाउँकै महिलालाई लिएर कार्यालय गएको र रातीसम्म बसिरहेको थाहा पाएपछि युवाहरुले वडा कार्यालय घेराउ गरेका थिए । स्थानीयले कार्यालय घेराउ गरेपनि वडाध्यक्षले भित्रबाट ताला लगाएर बसेको स्थानीय कुलबहादुर भण्डारीले बताए ।
ती महिलाको श्रीमान बिदेशमा छन् । उनीसँग लामो समयदेखि नै वडाध्यक्ष शर्माको हिमचिम थियो । सोही कारणले पनि राती अबेरसम्म कार्यालयमै बसेर अनैतिक कार्य गरेको हुनसक्ने स्थानीयको भनाई छ ।
प्रहरीले बिहान उनीहरुलाई त्यतिकै छोडिदिएको र महिला बेपत्ता भएकाले घटनाको छानबिन हुनुपर्ने र महिलाको खाजवीन गर्नुपर्ने भन्दै वडा कार्यालय तथा बिद्यालयमा समेत तालाबन्दी गरिएको वडा सदस्य सिता बिष्टले बताइन् ।